El Torno waxay isu diyaarineysaa saameynta isbeddelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Isbedelka cimiladu wuxuu kordhiyaa xoojinta iyo soo noqnoqoshada dhacdooyinka cimilada daran sida abaaraha iyo daadadka. Xaaladdan oo kale, waxaan tagnaa magaalada El Torno, ee Kolombiya, oo ay si daran u saameeyeen daad xoog leh 2010.
Xaqiiqda ah in magaaladan ay waxyeello u geysatay daadadku waxay keeneen ficil iyo horumar si looga diyaar garoobo saameynta isbeddelka cimilada. Sidan oo kale, El Torno maanta waa wax walba tusaale awoodda la qabsiga iyo u adkeysiga isbeddelka cimilada iyo waliba hab waara.
1 Daadad ka dhashay isbedelka cimilada
2 Tallaabooyinka ka dhanka ah isbeddelka cimilada
3 Waxaan wax ka barannaa qaladaadka
Daadad ka dhashay isbedelka cimilada
Magaalada El Torno waxaa sanado badan saameyn kuyeeshay roobab mahiigaan ah oo duufaano wata kuwaas oo sababay waxyeelo aad uxun iyo qarash badan oo dayactir ah. Si loo yareeyo saameynta xun ee daadadka, Wasaaradda Deegaanka iyo Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay (UNDP) waxay la shaqeyneysay hoggaamiyeyaasha gobol kasta oo Kolombiya ah tan iyo 2013 si loo diyaariyo dadka deggan loona kordhiyo adkeysiga ka dhanka ah saameynta isbeddelka cimilada.
Qorshayaasha ka dhanka ah isbeddelka cimilada waxay ku saleysan yihiin horumarinta barnaamijyada tababarka beeraha, guryaha iyo barnaamijyo badan oo ka caawiya la qabsiga kuleylka adduunka. In kasta oo ay run tahay in si kasta oo qorshe iyo barnaamij loo horumariyo, haddana weligood awood uma yeelan doonaan inay ka fogaadaan ifafaaleyaasha dabiiciga ah ee ba'an ee ay sababaan isbedelka cimilada, Haa, way yareyn karaan saameynta ay kuwani ku leeyihiin dadka. Saameyntani waxay noqon kartaa mid dhaqaale, bulsho, caafimaad, alaab maadi ah, iwm.
Tallaabooyinka ka dhanka ah isbeddelka cimilada
Si loo yareeyo saamaynta ay ku keento isbeddelka cimilada aagaggan iyada oo loo marayo astaamo dabiici ah oo aad u daran, barnaamijyo ayaa la soo saaray, sida, tusaale ahaan, sii kordhaya dhir dhaqameed u adkaysata daadadka. Gogosha abuurku waxay ka samaysan yihiin iniino awood u leh inay soo baxaan biqil u adkaysta daadadka. Sidan oo kale, maadaama aynaan iska ilaalin karin daadadka, ugu yaraan ma heli doonno khasaaraha dhaqaale ee beeraha beeraha.
Intaa waxaa dheer, miraha dhaqameedku sidoo kale waxay u adkaysanayaan cayayaanka iyo abaaraha (laba cawaaqib oo kale oo ay sababeen isbeddelka cimilada). UNDP waxay kaloo fulisay talaabooyin kale sida abuurista guryo ku habboon isbeddelka cimilada waxaana la sameeyay shabakad xarumo biyood si ay uga digaan una waaniyaan dadka degan marka Wabiga San Jorge uu bilaabo inuu khatar galo roobab mahiigaan ah oo culus.
Tallaabooyinkani waa kuwo aad u cajaa'ib badan waxayna gacan ka geysanayaan yareynta saameynta isbeddelka cimilada ee aagaggaas. Nasiib darrose, fikradahan iyo hal-abuurnimadani ma jirin 2010-kii markii daadadku dhaceen oo, in kasta oo aan dad badani geysan, waxay saameyn ku yeelatay 211.000 oo qof oo ku nool gobolka La Mojana, burburinta dalagyada, nidaamka deegaanka iyo in kabadan 20.000 oo guri.
Waxaan wax ka barannaa qaladaadka
Natiijada ka dhalatay masiibadan iyo saameynta ay ku yeelatay nolosha iyo hantida daadadka, Wasaaradda Deegaanka iyo UNDP waxay bilaabeen qorshe tijaabo ah oo looga hortagayo dhacdooyinka cimilada daran inay yareeyaan saameyntooda oo ay waxyeello yar yeeshaan. Qorshayaashan ayaa noqday dhaqanka wanaagsan ee ka hortagga musiibada waxayna mar horeba yihiin tixraac maalinle ah aagga. Taasi waa, waa ficillo ay fulinayaan dhammaan dadka oo dhan qiime ahaan bulshada dhexdeeda looga bartay.
Mashaariicdani waxay leeyihiin miisaaniyad qiyaastii sideed milyan oo doolar ah mahadnaqna waxaa macquul ah in laga fogaado musiibooyinka sida duufaanta Mocoa Si looga fogaado waxyeelada daadadka, keymo ayaa la beeray bulshooyinka hareeraha Wabiga San Jorge si loo habeeyo socodkiisa isla mar ahaantaana loo siiyo miro iyo caws xoolaha.
Sidaad u aragto, waxaa jira saameyn badan oo isbedelka cimilada uu ku leeyahay adduunka. Kama fogaan karno dhacdooyinka ba'an illaa iyo inta la dhimay qiiqa gaaska lagu sii daayo, laakiin saameynta waa la yareyn karaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » El Torno waxay isu diyaarineysaa ka hortagga saameynta isbeddelka cimilada